I-Penthouse Oasis - I-Airbnb
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Casa
IPenthouse Oasis iyifulethi elinesitezi eli-2 elinendawo evulekile esemgwaqweni othule esikhungweni somlando saseSetúbal. Ngenxa yokuthi indlu iseduze nomgwaqo omkhulu (i-Avenida Luísa Todi) uzohlala endaweni evundile maphakathi nedolobha elinempilo.
Indlu iklanywe abakhi bendawo be-Atelie91. Ngesikhathi sokwakha, sisebenzisa kuphela izinto ezisimeme zasendaweni zekhwalithi ephezulu ukuze sinikeze indlu i-ambiance ye-Setubalense. Indlu inezitezi ezi-2 (sezizonke ziyi-100 m2) futhi inesiqhingi sekhishi lemabula eliphelele, igumbi lokuhlala elivulekile, amagumbi okulala ama-2, ithala elikhulu elinosofa wokuphumula, igumbi lokugezela eliwubukhazikhazi, nenye indlu yangasese.
Ikhishi lihlome ngokugcwele; Ihhavini, i-Stovetop, isiqandisi, i-Microwave, i-Nespresso Machine (ahlanganisa amaphilisi), i-Toaster kanye ne-Juicer yokwenza ijusi yewolintshi entsha ekuseni :)
Amathawula, ilineni lombhede, iphepha lasendlini yangasese, insipho yokuwasha izitsha, usawoti, upelepele, amafutha omnqumo, amaphilisi ekhofi nezikhwama zetiye zifakiwe.
4.55 out of 5 stars from 145 reviews
4.55 · 145 okushiwo abanye
Indlu itholakala eduze komgwaqo omkhulu wedolobha, i-Avenida Luísa Todi. Imakethe entsha yansuku zonke (i-Mercado) iqhele ngamamitha angama-75 kuphela ukusuka endlini kanye nesitolo esikhulu (i-Pingo Doce) amamitha ayi-100. E-Avenida Luísa Todi uthola izinhlobonhlobo zezindawo zokudlela ezihlinzeka nge-gastronomy yasendaweni.
Ngihlala ngikhona ukuphendula yonke imibuzo yakho mayelana nendlu kanye nedolobha lami elihle.
Inombolo yepholisi: 14541/AL
Hlola ezinye izinketho ezise- Setúbal namaphethelo